को हुन् धरानका स्वतन्त्र मेयर बन्न सफल हर्क साम्पाङ ? – Sadhaiko Khabar
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ०८, २०७९ समय: २१:५२:३१
धरान / एमालेको गढ भत्काउदैं स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राई(हर्क साम्पाङ) धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा भारी मतले विजयी भए। उनले सत्ता साझेदार गठबन्धनको तर्फबाट मेयरका प्रत्यासी कांग्रेसका किशोर राईलाई पराजित गर्दै धरानको मेयरमा निर्वाचित भएका हुन्।
हर्कराजले २० हजार ८ सय २१ मत प्राप्तगरी मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्धन्दी कांग्रेसका किशोर राईले १६ हजार ५९ मत प्राप्तगरी उपविजेता बने। एमालेको लाल किल्लाकोरुपमा चिनिएको धरानको मेयरकी प्रत्यासी मन्जु भण्डारी १२ हजार ८ सय २५ मत प्राप्तगरी तेस्रो स्थान प्राप्त गरिन।
उपमेयरमा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका अईन्द्रविक्रम बेघा निर्वाचित भएका छन्। उनले २० हजार ५ सय १० मत प्राप्तगरी उपमेयरमा निर्वाचित भए। उनका निकटतम प्रतिद्धन्दी एमालेका पदम इस्वो लिम्बूले १७ हजार ६ सय ६ मत प्राप्त गरे।
धरान कम्युनिष्टहरुको लालकिल्लाका रुपमा परिचित छ। २०४८ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनोमोहन अधिकारीले चुनाव जितेको क्षेत्र हो धरान। २०७६ को उपनिर्वाचनमा मात्र कांग्रेसका तर्फबाट धरानको मेयरमा तिलक राईले मेयरमा जितेका थिए। सत्ता साझेदार दलहरुको गठबन्धन र एमालेको बलियो जनसंगठन रहेको क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजयी हासिल गरेपछि धरानमा राजनैतिक दलहरुको अलोकप्रियता बढ्दै गएको पुष्टि भएको छ।
धरानका राजनैतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र शर्माले कांग्रेस र एमालेले राम्रो उम्मेदवार दिन नसकेकै कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राई मेयरमा विजयी भएको बताए। हर्कराजले केहि वर्षदेखि गरेका सामाजिक कामको अगुवाई र कांग्रेस एमालेले विवादित व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाएका कारण धराने जनताले विकल्पका रुपमा हर्कराजलाई राजेको उनको भनाई छ।
हर्कराजको जितमा एमालेको उम्मेदवार छनौट प्रमुख कारण
धरानको मेयरमा हर्कराजको विजयको प्रमूख कारण भने एमालेको उम्मेद्वार छनौट प्रमुख कारण मानिन्छ। उपनिर्वाचनमा मन्जु भण्डारीकै कारण चुनाव हारेको एमालेले मेयरमा उनैलाई टिकट दिए पश्चात कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेको थियो।
२०७४ सालमा धरानका निर्वाचित मेयर तारा सुब्बाको निधन पश्चात कार्यवाहक बनेकी भण्डारीले पार्टी र जनताको हितमा भन्दा व्यक्तिगत लाभलिने गरी विवादास्पद काम गरेको भन्दै पार्टी भित्रै आलोचना भएको थियो।
२० वडा रहेको धरानमा एमालेका १० जना वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। एमालेका वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मत हर्कराजको भन्दा बढी छ। वडाध्यक्षको भन्दा आधामत मेयरकी उम्मेदवार भण्डारीलाई प्राप्त भएपछि उनी जनमत प्राप्त गर्न असफल बनिन्।
धराको वडा नम्बर ४, ५, ७, ८, १०, १२, १३, १५ र १९ नम्बरमा एमालेले वडाध्यक्षसहित प्यानल जितेको छ। वडा नम्बर २ मा अध्यक्ष र एक सदस्य एमालेले जितेको छ। प्राप्त मत परिणाम अनुसार धरानका प्रत्यक वडामा ६ सूर्यमा भोट हालेका मतदाताले मेयरमा भने लौरोलाई मत दिएको देखियो। यसले पनि मन्जु भण्डारीलाई दिएको टिकटको असन्तुष्टिका रुपमा हेरिएको छ।
हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) २०३९ फागुन १५ गते खोटाङको साविकको खार्तम्छा गाविस–९ चोखाने (हाल कोपिलास गडी गाँऊपालिका–२) मा जन्मिएका हुन्। गाऊँकै शुक्रबारे स्कृलबाट एसएलसी उत्तिर्ण गरेका उनी २०५६ सालदेखि धरान १८ मा स्थायी बसोवास गर्दै आएका छन्।
समाजसास्त्रमा स्नातक सम्मको अध्ययन गरेका राई हालसम्म कुनै पनि पार्टीको सदस्य छैनन्। धरानमा सर्दू जलाधार बचाउँ आन्दोलन, खानेपानी समस्याको आन्दोलन, भ्रष्ट्रचारविरुद्धको आन्दोलन, धनकुटे रोडको बस्ती बचाउँ आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राई सामाजीक अभियन्ता हुन्। उनले बीपी प्रतिष्ठान बचाउँको आन्दोलनमासमेत नेतृत्व गरे।
राईले धरानमा खानेपानी आयोजनामा चरम भ्रष्ट्रचार भएको भन्दै धरानमा आन्दोलन चर्काए। धरानवासिले खानेपानी खान नपाए पश्चात पानी माग्दैं आन्दोलन चर्काए त्यसको नेतृत्व पनि उनैले गरे। सर्दू खोलामा अवैध उत्खनन गरेको विषयमा आन्दोलन गर्दा उनलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो।
उनलाई धरानमा भ्रष्ट्रचार विरुद्धको अभियान्ताका रुपमा चिनिन्छ। चुनावमा मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनले आफूले चुनाव जिते सप्तकोसीबाट पानी ल्याएर धरानवासिलाई खुवाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। खानेपानीको चरम अभाव खेप्दै आएका धरानवासीले हर्कको चुनावी नारा मन पराएर भोट दिए।
मेयर राईले धरानमा कांग्रेस एमालेका नेताहरुको खराव प्रबृत्ति र राजनैतिक दलहरुको वितृष्णाका कारण धराने जनताले आफूलाई मत दिएको बताए।
उनले धरान उपमहानगरपालिकामा हुने गरेको भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। धरान बजारको व्यबस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, बीपी प्रतिष्ठानको र सामुदायिक विद्यालयको सुधार आफ्नो कार्यकालको पहिलो प्राथामीकतामा रहने बताए।
सिंगो नगरपालिकामा अन्य पार्टीका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। उनीहरुलाई खुसि बनाएर कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ? अन्नपूर्णको जिज्ञासामा उनले सबैलाई मिलाएर धरानको विकासमा एकीकृत भएर अगाडि बढ्ने बताए।
म व्यक्तिगत लाभ लिनलाई निर्वाचित भएको हैन। मेरो जित भनेको धरानवासिको जित हो, उनले भने गलत ट्रयाकमा गएको धरानलाई सही दिशामा फर्काउने पहिलो अभिभारा मेरो हुनेछ। – रत्नप्रसाद आचार्य ( अन्नपूर्ण पोष्ट बाट ।)